Saturday June 19, 2021 - 09:19:34 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Xabsiga fadeexadda ku caanbaxay ee Guantanamo Bay ayaa lagasii daayay maxaabiis muslimiin ah oo muddo tobanaan sana ah halkaas si gardarra ah ugu xirnaa.
Warbaahinta Mareykanka ayaa xaqiijisay in lasii daayay laba nin oo u dhashay dalka Yemen kuwaasi oo 17-kii sano ee lasoo dhaafay ku jilba xirnaa Guantanamo Bay.
Ragga lasii daayay ayaa kala ah Cali Al Xaaj AlSharqaawi iyo C/salaam Alhilaal, labadan nin ayay sirdoonka CIA xireen sanaddii 202 iyagoo ku eedaynayay in ay katirsanyihiin Al Qaacidda.
Sida ku cad liiska xabsiga Guantanamo Bay labadan ruux ee muslimiinta ah ayaa lagu waayay wax dambi ah taas oo ka dhigan in muddo 17 sana ah ay uxirnaayeen si gardarra ah.
Sanaddii 2004 ayay Cali Al Xaaj AlSharqaawi iyo C/salaam lakulmeen falal tacdiibin aad udaran ah, mid kamida maxaabiista ayaa muddo 24 saacadood ah miirdaboolsanaa sababa laxiriira tacdiibinta ay ugeysteen ciidamada American-ka ah.
Wasaaradda difaaca xukuumadda Washington ayaa xaqiijisay in labadan maxbuus lasii daayay 8-deedii bishan June ee 2021, Sharqaawi Cabdi Cali ayaa ku eedaysnaa in uu ahaa howlwadeen sare oo katirsan Al Qaacidda islamarkaana qaabilsanaa isku gudbinta lacagaha iyo in uu ciidamo uqoro Sheekh Osama Bin Laden.
Hay'adda dhaqaatiirta aan xuduudda laheyn ee MSF ayaa warbixin ay soo saartay sanaddii 2019 waxay ku sheegtay in xaaladda caafimaad ee Sharwaaqi ay aad uxumaatay sababa laxiriira isagoo cuntada ka soomay.
Warbixinnadii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in illaa 40 maxbuus ay wali ku xiranyihiin xabsiga fadeexada ku caanbaxay ee Guantanamo Bay halkaas oo loogu geysanayo gabood fallo.
20 sano kadib ayuu Guantanamo Bay furanyahay waxaana beenoobay dhammaan ballanqaadyadii ay jeedin jireen siyaasiyiinta Mareykanka oo ahaa in marka ay talada qabtaan albaabada loolaabi doono xabsigan fadeexadaha ku caanbaxay.
Maamulka 'Puntland' oo maxaabiis rayid ah ku xasuuqay Waqooyiga Gaalkacyo.
Nidaamka Alsiisi oo xukunno daldalaad ah ku fuliyay Maxaabiis.
Hay'adda Hormuud Salaam ayaa deeq gaarsiisay Xabsiga Dhexe Iyo Isbitaal martini [Sawirro].
Nin 35 sano aan Iftiinka adduunyada arkin oo Xuriyaddiisa dib uhelay [Warbixin].